यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ, के हुन्छ बेला बेलामा वी’र्य नफाल्दा ? - नेपाली खोज
यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ, के हुन्छ बेला बेलामा वी’र्य नफाल्दा ?
काठमाडौं। के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी स’मस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सु’निने, गनाउने, नाइटोमुनि दु’ख्ने’, वीर्य खस्दा पो’ल्नेजस्ता स’मस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी पुरुष प्रजनन ग्रन्थीमा स’ङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्या’न्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो ।
दमौली, ४ फागुन: तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ मा जैविक विविधता संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित तनहुँसुर इको ट्रेकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । मूलपानीबाट तनहुँसुरसम्मको जैविक विविधता संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरणीय सेवा र ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणका लागि इको ट्रेकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।
के सबै उमेरका बच्चाहरूले शिलाजीत खानु पर्छ?
यि महिलाले दिइन् पतिलाई डिर्भोस, कारण सुन्नु भयो भए तीनछक पर्नुहुनेछ !